Hapasisinazve Dzokororo Mafaira PaMac: Tarisa uone Maitiro Ekuchengetedza Iyo Sisitimu Yemahara - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
macOS, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Dzokororo mafaera makopi emagwaro ako ekutanga. Izvi zvinogona kugadzirwa nemarware kana pawakapa iro rairo maviri uchichengeta mifananidzo, iTunes, kana rumwe ruzivo. Asi, muMac yako, zvakapetwa mafaera haafanire kuve nenzvimbo. Sezvo mafaira aya anobata yako yekuchengetedza system. Naizvozvo, iwe uchasangana nematambudziko uchitsvaga mitambo, kunyorera, kana mamwe magwaro akakosha. Zano rakanakisa nderekudzima mafaera akapetwa kubva pakombuta yako uye unakirwe neyakakurumidza kumhanya system maitiro.
Sei kudzima mafaera akanyorwa kubva pakombuta yako?
Pane nzira mbiri dzekudzima duplicate mafaera kubva kune yako Mac. unogona kuenda nemanyorero maitiro kana kusarudza Software kudzima mafaira asingadiwe. Ngatikurukurei zvese zvakadzama:
Sei kudzima zvakapetwa mafaira nemaoko?
Paunenge usiri mumood yekuisa uye kushandisa wechitatu-bato Software kudzima mafaira. Unogona kushandisa tsvaga yekushandisa kutsvaga uye kudzima mafaera akanyorwa. Ingo rangarira, ino inguva inotora nguva uye ine mukana wakakura wekukanganisa. Saka, chenjera paunenge uchishandisa iyo yemahara yekuwana chishandiso. Ngatizivei mashandisiro ekushandisa yekutsvaga chishandiso:
Enda ku Faira uyezve Nyowani smart folda kuti uvhure tsvaga mu mac.
Iwe uchaona yekutsvaga bar pakona yekurudyi yechiratidziri
Nyora zita refaira raunoda kudzima
Iwe uchaona rondedzero yesarudzo yakazadzwa neakaenzana mafaera.
Tarisa nekudzvanya nzvimbo yekutarisa uye bvisa imwe nefaira rimwe kubva kuhurongwa.
Rangarira, kana uchinge wadzima iyo yakapetwa faira, idzi dzinozoenda kumarara. Saka usakanganwa ku bvisa marara uye tora mukana weimwe yekuwedzera nzvimbo pane ino system.
Sei kudzima mafaera neyechitatu-bato software?
Zviverengero zvechitatu-bato maturusi anobatsira kutsvaga zvakapetwa mafaera paMac. Aya mafomu akachengetedzeka sezvo ivo vachibvunza iwe nezveyemberi usati wabvisa mafaera. Chikamu chakanakisa ndechekuti hapana chikonzero chekutarisa nekuwana imwe neimwe. Iko kunyorera kunogona kubatsira tsvaga zvakapetwa paMac nekukenya mashoma chete. Iwe unowana rondedzero yemamwe ese maficha mifananidzo, iTunes, uye mamwe magwaro mune yako system.
Iwe unogona kuwana uye kudzima mafaera nekutarisa misi, madhiraivha, maforodha, uye nerumwe ruzivo. Iwe unogona zvakare kuwana uye kubvisa mafaera nekutarisa iyo hombe zvinhu zvekuchengetedza.
Ramba uchifunga, sezvakakurukurwa kune akati wandei-bato Software iripo, zvese zvaunoda kuti usarudze iyo yechokwadi uye yakachengeteka kune yako system. Naizvozvo, usakanganwa kuverenga wongororo uye akakosha maficha ezvawasarudza Software. Zvichabatsira kuchengetedza nguva uye iwe unenge uine ruzivo rwakakwana nezve Software kufanoita.
Kana iwe uchida kukwidziridza kugadzirwa kwebasa rako uye kuwedzera sisitimu yekugadzirisa kubvisa duplicate mafaera inhanho yakakosha. Inobatsira kuchengetedza nguva uye kugadzira nzvimbo yakakwana yekuwedzera mari. Kana iwe uine nguva yakakwana yekushandisa pachiratidziro, unogona kudzima ega ega mafaera kubva kuhurongwa. Zvikasadaro, kusarudza duplicate mafaera Software inogona kukubatsira uye kuchenesa sisitimu nekudzvanya zvishoma.